Puntland oo bilowday qorshe lagu horumarinayo waxbarashada deegaamada Puntland – Radio Daljir
Maarso 10, 2013 8:24 b 0
Garoowe,10 March 2013 Wasaarada waxbarashada Puntland ayaaa sheegtay inay wada qorshe lagu horumarinayo waxbarashada guud deegaamada Puntland, Agaasimaha guud ee wasaarada waxbarashada iyo barbaarinta ?Puntland Maxamed Cabdi Wahaab ayaa sheegay inay ?wasaarada waxbarashadu bilowday qorshe lagu horumarinayo nidaamka waxbarashada Puntland isagoo intaas ku daray ?inay sanadkaan wasaaradu halku dhig ka dhigatay tayeynta waxbarashada.
Agaasimaha oo u waramay radio Daljir ayaa sheegay in ay waxka badaleen qaybo ka mid ah nidaamkii waxbarashada ardayda dugsiyada sare waxaana uu sheegay in ay wasaaradu samaysay nidaam diiwaan gali ah oo lagu ogaanayo ?ardayda wax ka barata dugsiyada sare iyadoo arday walba laga biixinayo warqada xogta ardayga taas oo ay wasaaradu kala soconayso xogta guud ahaanba ardayda dhigata dugsiyada Sare ee Puntland.
Waxaa kale oo uu bulshada ugu baaqay ?agaasimaha waxbarashada Puntland Maxamed Cabdi Wahaab inay raacaan nidaamka sharciga ah ee loo asteeyey waxbarashada puntland ayna ka illaaliyaan ubadkooda in la bootiyo oo laga gudbiyo fasalo waxbarasho oo muhiim u ah,
Dhinaca kale mar? aan wax ka waydiiney agaasimaha inay jiraan caqabado dhinaca waxbarashada ah ayaa waxaa uu sheegay inay horay u jiraan illaa (6) ?dugsiyo sare oo aan? sharciga waafaqsanayn ?kuwaas oo ?(4) ka mid ah albaabada loo laabay kadib markii ay ?garwaaqsadeen khaladkooda, inta dhimana waxaa uu sheegay in ?la siiyey digniin la xariirta tubta khaldan ee ay ku hoggaaminayaan dhalinta wax ka barata.
Mudooyinkii danbe ayaa waxaa jirey qorsheyaal ay wadey wasaarada waxbarashada Puntland taas oo lagu horumarinayo guud ahaanba ?waxbarashada Puntland taas oo ay wasaaradu la kaashaneyso ha?adaha ka shaqeeya arimaha waxbarashada.
Diiwaanka wararka Dalajir.